Kadib Ganaaxa Lagu Soo Rogay Bernardo Silva Xaalada Man City Ee Ee Ka Hor Kulanka Chelsea Oo Sii Xumaatay. - Gool24.Net
November 14, 2019 Mahamoud Batalaale
Kooxda Manchester City iyo xidiga kooxdeeda ee Bernardo Silva ayaa helay go’aankii kama danbaysta ahaa ee xidhiidhka kubbada cagta England waxaana lagu soo rogay ganaax lacag iyo kulan iskugu jira.
Bernardo Silva waxa uu seegi doonaa kulanka muhiimka ah ee ay kooxdiisa Manchester City la ciyaari doonto Chelsea kadib markii lagu xukumay hal kulan oo ganaax ah iyo 50 gini.
Bernardo Silva ayaa bishii October lagu eedeeyay in uu cunsurinimo kula kacay xidiga ay isku kooxda yihiin ee Benjamin Mendy kadib markii uu baraha bulshada soo dhigay sawir muran badan dhaliyay oo baadhitaan keenay.
September 22 ayay ahayd markii uu Bernardo Silva biyo kulul ku dhex riday naftiisa ee uu sawirka hoose soo dhigay bartiisa twitterka kaas oo uu Benjamin Mendy ku bahdilay waxayna taasi keentay in dacwad lagu soo oogay.
Xidhiidhka kubbada cagta England ee FA-ga ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in falkii uu sameeyay Bernardo Silva uu ahaa mid anshax xumo iyo aflagaado ah isla markaana uu jabiyay qodobka FA rule E3 farqadiisa 1 aad.
Laakiin waqtiga uu ganaaxa Bernardo Silva ku soo beegmay ayaa ah waqti xaasaasi ah kadib guuldaradii City ka soo gaadhay Liverpool iyo waliba muhiimada kulanka Chelsea.
Inkasta oo Bernardo Silva uu sawirka iyo qoraalka uu baraha bulshada soo dhigay ku doonayay in uu kula kaftamo saaxiibkiisa Man City ee Benjamin Mendy, haddana waxaa arintan loo qaatay in ay tahay mid anshaxa ka baxsan oo aan kaftan gali karin.
Pep Guardiola ayay dhirbaaxo wayn ku tahay in Bernardo Silva uu kooxdiisa ka maqnaan doono kulanka Chelsea ee November 23 isaga oo waliba ahaa mid ka mid ah xidigihii ugu muhiimsanaa kulankii Anfield ee goolka kaliya City u dhaliyay.
Chelsea ayuu maqnaanshaha Bernardo Silva u yahay mid ka yarayn karta halista kooxda Guardiola iyada oo waliba ay kulankii Liverpool ka maqnaayeen xidigo muhiim ah oo ay ka mid yihiin Leroy Sane, David Silva, Ederson iyo Laporte iyada oo Guardiola uu ogaan doono haddii ay Silva iyo Ederson soo laaban karaan.
Si kastaba ha ahaatee, Bernardo Silva ayaa ganaaxa halka kulan iyo 50 ka gini ee ganaax ah ku mutaystay wax uu markii hore doonayay in uu xidiga kooxdiisa City ee Mendy ugu maadsado balse waxay keentay arin aanu markii hore filayn.